Yurt Living - Ndụ Dị Mfe, Near Branson, MO | Achọpụtara nke ọma
Yurt Ndụ nso Branson, MO
Home » Ndepụta » Yurt Ndụ nso Branson, MO
Ikwalite ndụ na-enye ụzọ ndụ dị mfe - nkwupụta nke mmụọ okike. Ị na-ebi nso na okike ma na-eche na enwupụta na efọk - echebe. Jikọọ na mkpụrụ obi gị na nke a dị ịtụnanya ohere.
"Achọrọ m ibi n'ime ọha mmadụ
enwe ọṅụ nke ime ihe. "
Bill Coperthwaite, onye gụsịrị akwụkwọ na Harvard, bụ onye na-asụ ụlọ yurt ma na-ebi ndụ na USA, kụziri ọtụtụ ọmụmụ ihe ebe a ma kpalie ya ma malite nchịkọta nke a ebe. Tinyere onye na-ewu ụlọ a maara nke ọma, Peter Kramer si Minneapolis, ha duuru iwu ụlọ abụọ nke yurts anọ ahụ.
Na-eme ka ọ bụrụ na ị na-ewu ụlọ.
Nke kachasị nke yurts bụ yurt na-enwe centric centr na nwere ogwe ụkwụ 1800. O nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ na-acha odo odo ma ọ bụ osisi pine na osisi shingle sida. A na-eji ụlọ e ji ọla kọpa rụọ na shingles na-emepụta ụlọ. N'ime oge okpomọkụ, enwere nnukwu ákwà na nkwụsị ọ bụla dị na ya na ikwe ka a na-agbanyeghị Ozark dị ọcha.
Nke a na-aga n'ihu n'okporo ụzọ awara anya nke nwere ezigbo ọhụụ na ezi okporo ụzọ.
Ndị nwe ugbu a bụ ndị na-ese ihe ma na-etinye oge ha na-eme nnukwu ite na-acha uhie uhie na ite nkata. Ha anabatawo ndụ yurt ma zụlite azụmahịa dị mma ebe a ma ebe ahụ ejiriwo ha rụọ ọrụ nke ọma. Ulo oru di iche iche nwere ike ime nke oma ebe a. Ọ bara uru maka ọmụmụ ihe ma ọ bụ nwee ike ịbụ ebe ezumike maka ezinụlọ na ndị enyi. E nwere nnukwu ụlọ maka ebe mposo.
A na-edozi yurts atọ fọdụrụnụ na ala ahụ na ebe dị jụụ, dị jụụ. Nnukwu nnukwu mposi nke na-eme ka elu ụlọ yurt mechie anya n'etiti ha. Ejila mmiri na-eje ije site na yurt ka ị na-akwa! N'okpuru ebe mkpuchi bụ ebe zuru oke maka iri nri fresco!
Nke abụọ Coperthwaite wuru yurt bụ concentric na imewe na-agụnye 700 square ụkwụ. Ihe mpụta na ọtụtụ n'ime ime ya bụ nke poplar. A na-eji yurt a eme ihe ugbu a dịka "ụlọ" na-akwadokwa. Mgbe ụbọchị gị na ndị ahịa na-emekọ ihe, na-ewere ma na-emezu iwu, ọ bụ ihe obi ụtọ ịkwaa ebe a. E nwere ebe dị ndụ na kichin na ala dị larịị na ime ụlọ n'elu.
Ugboro abụọ yurts nke ọ bụla gụnyere 133 square ụkwụ na e wuru site na Coperthwaite atụmatụ. A na-eji otu ihe maka nchekwa ma nwee oghere cedar cedar. A na-eji nke ọzọ dị ka bathroom yurt ma nwee mgbatị na-acha oji walnut. Akuku ahu gunyere ebe di omimi, usoro septic, na acres nke oku maka nku osisi.
Nke a pụrụ iche Mmiri mmiri ozuzo ụlọ na-anọdụ na 4 mara mma acres na osisi nke ọtụtụ akụrụ na hickory, ebe maka ubi ma ọ bụ ubi mkpụrụ osisi, na ubi mara mma nke okooko ọhịa.
Ebe dịpụrụ adịpụ na oke obodo Reeds Spring na n'ime Reeds Spring School District, enwere ihe dị ụtọ maka ụmụaka na ndị okenye dị ka Xcape Branson ma ọ bụ ziplining na Zip USA.
Mpaghara gbara gburugburu na-enye ọtụtụ ihe omume na-atọ ụtọ. Maka ịkụ azụ, kayak, na ebe a mara ụlọikwuu, e nwere James River ma ọ bụ Table Rock Lake na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 500 kilomita nke shoreline. Na Ogige Atụmatụ Silver Dollar bụ naanị 18 kilomita site na n'ezie, Branson dị obere karịa 20 nkeji.
Ị nwere ụlọ pụrụ iche ịre?
Ahịa: $ 129,000
Okwu: Highway 413
Ime ụlọ: 1
Ụlọ ịwụ ahụ: 1
Nke gara agaEbube Ezubere, Ezubere nke Ukwuu, Na-eche Maka NkwụsịIhe na-esoteCounty Clare Ecohouse, Ireland